မောင်ရင်ငတေ ** MAUNGYINNGATAY **** မောင်ရင်ငတေ ***: ** မျက်မြင် တောထဲက မီး ** *
မျက်မြင် တောထဲက မီး
ရှို့မီးလား တောမီးလား သေချာတော့ မသိ၊ ရှို့မီးဖြစ်ဖို့ကတော့ များကြောင်း ဆိုကြပါတဲ့ မီး . . ..... ပါ၊
အဲဒီလို အမည်မသိ တောမီးလောင်နေတာ အခုရက်ပိုင်းလပိုင်းမှာ အကြိမ်တော်တော် များနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေက ထုတ်ဖော် ငြီးငြူ နေကြပါပြီ၊ ဒီလို မြို့ကြီးပြကြီးတွေနဲ့ အလှမ်းဝေးရာ နယ်စွန်နယ်ဖျား နယ်စပ်ဒေသတွေရဲ့ လုံခြုံမှုက မောင်ရင်ငတေတို့ မွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့ရာ ဒေသတွေက လိုပါပဲလား . ..... ဘယ်လိုပါလဲ . .... ..... တွေးမိရကြောင်းပါ၊
တခု မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ တွေမြင်မိခဲ့တာကတော့ .. ..... နေမွန်းတည့်ချိန်က စတင်ခဲ့တဲ့ အဲဒီ မီးဟာ . .. . .... ညနေစောင်း ခြောက်နာရီကျော်အထိ အပြီးတိုင် မငြိမ်းသေးလို့ မီး ငြှိမ်းသတ်နေကြတဲ့ လေယာဉ်တွေ ရဟတ်ယာဉ်တွေကို တွေ့ခဲ့ရတာပါ၊
Libellés : မြို့ရွာတောတောင်ရေမြေ, မြေထဲပင်လယ်ဆီသို့